Eorôpeana Latsaky ny 40 Taona ‘Mipetraka Any Amin’ny Firenena Hafa’? :Mihaino Anao Ny ‘Generation E’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2014 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, polski, Italiano, English
“Fa nahoana no Generation E? E sahala amin'ny hoe Europe, Expat, Erasmus, Exodus, Escape. Miainga amin'ny petrakevitra – somary mampandrevy kely – hoe ny tanora Eorôpeana ‘mipetraka any amin'ny firenena hafa’ no mandrafitra ny fototry ny tambatsela sosialin'ny Eorôpeana amin'ny hoavy.”
Fampitandremana: Miasa ho an'ny tetikasa GenerationE.eu ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.
Isan'andro, manorona ny entany ary mitodi-doha any amin'ny firenena hafa ao amin'ny Vondrona Eorôpeana ny tanora an-jatony avy any atsimon'i Eorôpa mba hitady ho avy tsaratsara kokoa. Any amin'ny sisintany no tena miha-malaza — indrindra i Portogaly, Italia, Gresy ary Espaina –izay miatrika krizy ara-toekarena sy tàha ambony amin'ny tsy fananana asa, nanosika olona an'hetsiny efa tokony hiasa niala teo an-toerana, nandritra ireo efa-taona farany teo.
Antsoinay ato anatiny hoe “Generation E” izy ireo: Eorôpeana latsaky ny 40 taona, ‘mipetraka any amin'ny firenena hafa’, miaina ny zo fototry ny Vondrona Eorôpeana momba ny fahalalahana mivezivezy mba hanorina ho avy ao anatin'i Eorôpa, fa kosa tsy ao amin'ny firenena niaviany. Sarotra arahana anefa ny fifindrafindran'ny fitambaran'ireo olona ireo ao amin'ny tanibe. Misy ihany ireo vinavina maro sy fitambaranà angon-drakitra mitapatapaka, eo amin'ireo firenena voakasik'izany, fa kosa tsy misy antontanisa na sarintany marina tsara, avy amin'ireo firenena voakasik'izany.
Midira ao amin'ny “Generation E“, fanadihadiana fitadiavana angon-drakitra momba ireo tanora Eorôpeana mpifindra monina. Te-hanome hazavana mikasika ny angon-drakitra efa misy, ary hanangona ny fandraisan'anjaran'ireo tanora Eorôpeana any ivelany, ny tanjon’ ilay tetikasa tsy miankina, izay vatsian'ny journalismfund.eu ara-bola.
Avy amin'ny hetsika hisian'ny fandraisan'anjaran'ny avy eny ifotony, karakarain'ny ekipa-nà mpanao gazety maneran-tany, ny 8 Septambre 2014, ireo tanora mipetraka any amin'ny firenena hafa, avy any Portogaly, Italia, Gresy ary Espaina, dia asaina mba hizara ireo tantarany manokana momba ny fiampitàna ilay sisintany tsy hita maso an'ny Tanibe fahiny, mba hanorina fiainana andavanandro any amin'ny firenena hafa.
Fifindramonina faobe ao amin'ny Faritra Eorôpeana ihany ?
Sarotra tantanina sy atao ambanin-javatra ilay zava-mitranga, eo amin'ny lafiny habe sy fahamarinan'ny angon-drakitra. Voamarika fa ataon'ireo loharano eo an-toerana “ambanin-javatra be ny fifindramonina any amin'ny firenena hafa”, araka ny fanadihadiana nataon'ny Filankevitra Ambony ho an'ny Fikarohana Siantifika (CSIC) any Espaina — firenena izay very tanora lehibe 20 ka hatramin'ny 40 taona eo ho eo, miisa 102.000 araka ny angon-drakitra ofisialy, tao anelanelan'ny taona 2010 sy 2013 :
Mety ho manakaiky ny 700.000 ny marimarina kokoa ny [fitambarany] isan'ireo [mpifindra monina], tao anelanelan'ny taona 2008 sy 2012, mitaha amin'izay vivavinan'ny loharano ofisialy ho 225.000.
Tanora lehibe miisa 135.000 no niala tany Italia hatry ny taona 2010, saingy tsy voarain'ireo antontanisa ofisialy tao amin'ny fanisàny ireo tsy nanao taratasy mazava tsara ny amin'ny fiovam-ponenany. Mitatitra i Jacopo Ottaviani, ilay Italiana mpanao gazety mpandrindra ny tetikasa Generation E, ao amin'ny Il Fatto Quotidano hoe “lazain'ireo vinavina miely fa farafahakeliny in-droa amin'io no isan'ireo mpifindra monina”. Anisan'ireo mpiandraikitra ofisialy mihitsy izy.
Any Angletera, firenena tanjona voalohany ho an'ireo mihazakazaka avy any Italia, nanamarika ny masoivoho Italiana any Londres, Massimiliano Mazzanti, fa miisa eo amin'ny manodidina ny 220.000 eo ireo Italiana “voasoratra ofisialy ao amin'ny AIRE [firaketana ireo Italiana monina any ivelany], raha maherin'ny antsasaky ny iray tapitrisa ireo vinavinaina manerana ny firenena ary 250.000 kosa ao amin'ny renivohitra”. Tsy mahagaga, nandray ny Praiminisitra Renzi tao amin'ny ” Tanàna Italiana faha-enina” ny ben'ny tanàna Boris Johnson. Sahala amin'ny hoe nafindra ho eo anelanelan'ny distrikan'i Londona ny tanàna toa an'i Genoa.
Portiogaly, firenena manana mponina miisa latsaky ny 10,5 tapitrisa, dia manana mpifindra monina miisa 2,3 tapitrisa (20,8 isan-jato), mitàna ny laharana faharoa maro mpifindra monina indrindra raha araka ny tahan'ny mponina no jerena, amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona, ao aoriana kelin'i Malta. Nandritra izay efatra taona farany izay, manodidina ny tanora lehibe miisa 107.000 — ao anatin'ny 20 taona sy 40 taona — no niala tsy hiverina intsony raha araka ny taratasy, mitovitovy amin'izay ihany koa ny isan'ireo nifindra monina noho ny asa an-tselika ary mijanona any.
Tsy voamarina amin'ny fitambarambeny ihany koa ny fifindrà-monin'ireo avy any Gresy, firenena izay mahatratra avo indrindra ny tahan'ny tsy fananana asan'ireo tanora (manakaiky ny 60 isan-jato ny taona 2013). Nanontanian'ny ekipa mpanao fanadihadiana any Athena, nilaza ny Manampahefana momba ny Antontanisa Hellenika fa tsy mitàna an-tsoratra ireo topanà fifindramonin'ny Grika izy ireo.
Tantaran'ny Generation E, naely any ivelany
Milaza ao amin'ny bilaogy Zanaka Am-pielezana Vaovao (New Diaspora) i Sofia Gkiousou, amin'ny maha mpifindra monina Grika azy any Londona, hoe “resaka manokana ho an'ny tsirairay mihitsy ny safidy na ny fanerena hifindra any ivelany, misy fiantraikany amin'ny fiainany marina.” Inona no mahatonga ilay fanapahan-kevitra hifindra? Misy faniriana hiverina ve ao sa tena any an-kafa mihitsy no te-hipetraka izy ireo? Inona ireo olana atrehan'ireo tanora Eorôpeana any am-pielezana ankehitriny? Inona ireo fanantenana izay mamelona ny ho avin'izy ireo?
Mba hampivelarana ilay nantsoina hoe “Generation Y” (ireo “teraka tao anelanelan'ny taona 1980 sy 1994-99“, izay voafaritr'ilay mpanao gazety Portigey Ana Cristina Pereira) tsara, manolotra hevitra ny “Generation E” mba hiverenana hatrany amin'ny taona 1974 ary mitondra hazavàna amin'ny tantaran'ireo mpifindra monina ankehitriny izay teraka tao anatin'ny 20 taona voalohany, taorian'ny faharavan'ny jadona tany Portiogaly, Gresy ary Espaina.
Ny faran'ny volana Oktobra ireo vokatry ny tetikasa no haelin'ny Il Fatto Quotidiano (Italia), El Confidencial (Espaina), RadioBubble (Gresy) ary P3/Público (Portogaly), ary misy ireo fanazavana bebe kokoa avy amin'ny tantara avy any ifotony, an'ireo nandeha any ivelany, fanadihadiana ifotony ny angon-drakitra (jerena amin'ny sarintany amin'ny aterineto sy kisary azo tetezina), ary tafatafa niaraka tamin'ireo mpikaroka sy mpanapa-kevitra avy any Eorôpa.
Raha latsaky ny 40 taona ianao ary niala tao Portiogaly, Italia, Gresy na Espaina, tato anatin'ny taona faramparany, tantarao anay ny tantaranao. Raha manana namana tafiditra ao amin'ny “Generation E” ianao, asao izy ireo mba hizara ny fifaliany sy ny drafitra-ny, ny fanantenana ary ny tahotra. Afaka atao izany ao amin'ny vohikala ofisialy (hita amin'ny fiteny Portiogey, Italiana, Grika, Espaniola ary Anglisy), pejy Facebook sy vondrona, ary amin'ny tenifototra #GenerationE ao amin'ny Twitter ihany koa. Apetraho ny tantaranao!
Eo an-dalan'ny fikatrohana azy ity tetikasa ity, miaraka amin'ny fanohanan'ny Journalismfund.eu.